Meydka 3 nin oo Culimo ahaa oo laga helay Xaafada Buundaweyn e Baladweyne – SBC
Meydka 3 nin oo Culimo ahaa oo laga helay Xaafada Buundaweyn e Baladweyne
Xaafada Buundo weyne e magaalada Baladweyne ee gobolkaasi Hiiraan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in laga helay ku dhowaad 3 qof oo Meyd ah kuwaasi oo aan la aqoon ilaa iyo iminka cida ka dambeysa dilkooda.
Wararku waxa ay in taasi ku darayaan in 3da qof ee meydkooda la helaya y ku tiilay rasaas loo adeegsaday dilkooda, waxaana ay ahaayeen sida wararku ay nagu soo gaarayaan Culimo ka tirsan Ururka tagfiir walhijra.
Waxaa la sheegay in 3daadi qof ay ahaayeen kuwo laga yaqaan magaalada Baladweyne iyadoona isla saaka lagu aasay magaaladaasi.
Dadka ku dhaqan xaafada Buunda weyn ee magaalada Baladweyne ayaa arinkani walaac ka muujiyay iyadoo lagu tuhunsanyahay in ay dileen 3dani culimo ciidan ku labisnaa Dress-ka Ciidamada DKMG ah kuwaasi oo xalay lagu arkay deegaanka Buundaweyn.
Si kastaba ha ahaatee Tani waxay noqoneysaa tii ugu horeysay oo ceynkan oo kale ah oo lagu arko magaalada Baladweyne iyadoona ilaa iyo haatan aan la xaqiijin Karin cida sida rasmiga ah uga dambeysa.